Sunrise bank limited(Sunrise bank limited) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
सनराइज बैंकका ग्राहकलाई ग्रीन भ्याली रिर्सोटमा १०% छुट
काठमाण्डौ। सनराइज बैंकले आफ्ना ग्राहकको सहजता तथा सुविधालाई मध्यनजर गर्दै अस्पताल, रेस्टुरेन्ट तथा विभिन्न क्षेत्रमा विशेष छुटसहितका सुविधा दिँदै आएको छ। यसै क्रममा बैंकले होटल क्षेत्रमा समेत विभिन्न छुट दिने उद्देश्यले डाँडगाँउ शिवपुरीस्थित ग्रीन भ्याली रिर्सोटसँग सम्झौता गरेको छ। बैंक तथा ग्रीन भ्याली रिर्सोटबीच बैंकका...
सनराइज बैंकको ग्राहकलाई मनकामना केबल कारको टिकट खरिदमा क्यासब्याक
काठमाण्डौ । 'स्मार्ट बनौं, डिजिटल बैंकिङ गरौं' अभियानलाई आत्मासाथ गर्दै सनराइज बैंकले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ सनराइज स्मार्टको प्रयोग गरी मनकामना केबल कारको टिकट खरिद गर्दा क्यासब्याक दिने योजना ल्याएको छ। यस योजनाअन्तर्गत सनराइज बैंकका ग्राहकले बैंकको सनराइज स्मार्ट प्रयोग गरी खरिद गरिएको हरेक टिकटमा १०० रुपैयाँ क्यासब्याक...
काठमाण्डौ । सनराइज बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा सुमन शर्मा नियुक्त भएका छन्। बैंक सञ्चालक समितिको आज बसेको बैठकले शर्मालाई सीईओमा नियुक्त गरेको हो। उनको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ। उनले बुधबारदेखि नै कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । शर्मा बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभवी र कुशल बैंकरका रुपमा चिनिन्छन्। उनीसँग बैंकिङ क्षेत्रमा ३ दशक...
जनक शर्माले सनराइज छाडे, एकदुई दिनमै नयाँ सीइओ ल्याउने तयारी
काठमाण्डौ । सनराइज बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ)बाट जनक शर्मा पौड्याल बाहिरिएका छन् । उनले आज पदबाट दिएको राजीनामा आजै बसेको बैंक संचालक समितिको बैठकले स्वीकृत गरेको छ । शर्माले बैंक छाडेसँगै नयाँ सीइओको समेत खोजी हुन थालेको बैंकस्थित स्रोतले जनाएको छ । सनराइज बैंकको आगामी सीइओका लागि सुमन शर्मा, कुमार लम्साल, राजीव...
सनराइज बैंकको डेपुटी सीइओमा आरती राणा नियुक्त
काठमाण्डौ । सनराइज बैंक लिमीटेडको डेपुटी सीइओमा आरती राज्यलक्ष्मी राणा नियुक्त भएकी छिन् । बैंकको संचालक समितिको आज बसेको बैठकले डेपुटी जेनेरल म्यानेजर(डिजिएम) राणाको पदोन्नति गर्दै डेपुटी सीइओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । राणा करिब १४ महिनाअघि(२४ अक्टोबर २०१९) ग्लोबल आइएमई बैंक छाडेर सनराइज बैंक आएकी थिइन् । नेपालका...
सिरहाको भेडियामा सनराइज बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा सुरु
काठमाण्डौ । सनराइज बैंक लिमिटेडले सिराहा जिल्लाको कल्यानपुर नगरपालिका–७ भेडीयामा बुधबारदेखि शाखारहित बैंकिङ सेवाको सुरुवात गरेको छ। योसहित बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवाको संख्या ६९ पुगेको छ। बैंकले त्यहाँ शाखारहित बैंकिङ सेवाको प्रतिनिधिका रुपमा दीपेन्द्र शाहलार्ई नियुक्त गरेको छ। उद्घाटनका अवसरमा प्रमुख अतिथिमा जिल्ला...
रामेछापमा सनराइज बैंकको थप दुई शाखारहित बैंकिङ सेवा सुरु
काठमाण्डौ । सनराइज बैंक लिमिटेडले रामेछापको मन्थली नगरपालिका–११, सावाडाँडा, गेलु र उमाकुण्ड गाउँपालिका–७ भुजिमा शाखारहित बैंकिङ सेवाको सुरुवात गरेको छ। यी दुवैसँगै अब बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवा संख्या ६८ पुगेको छ। हिजो शनिबार आयोजित दुई छुटाछुटै कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिमा मन्थली नगरपालिका वडा नं. ११ का उपप्रमुख मायाकुमारी...
सनराइज बैंकले साना संस्था प्राप्तिको बाटो बन्द, राष्ट्रबैंकले भन्यो–‘कुनै वाणिज्य बैंकसँग तत्काल मर्जर सम्झौता गर्नू’
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकले सनराइज बैंक लिमीटेडलाई ‘क’ वर्गकै कुनै बैंकसँग मर्जर गर्न कडा निर्देशन दिएको छ । सिर्जना फाइनान्ससँगको जारी प्राप्ति प्रक्रिया प्रष्ट कारणबिना भाँडिएपछि यसैलाई आधार बनाएर नेपाल राष्ट्रबैंकले मर्जर विनियमावलीअनुसार सनराइज बैंकलाई विभिन्न कारबाही गर्दै ‘क’ वर्गकै बैंकसँग तत्काल मर्जरको...
सनराइज बैंकको नाफा रु. ९४.९४ करोड, ईपीएस रु. २१.०६
काठमाण्डौ । सनराइज बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म ९४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। आज सार्वजनिक दोस्रो त्रैमास वित्तीय विवरणअनुसार बैंकले समीक्षा अवधिसम्म खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनासम्म ०.५३ प्रतिशतले बढाउन सफल भएको छ। गत वर्ष यही अवधिसम्म बैंकको खुद नाफा ९४ करोड ४३ लाख रुपैयाँ रहेको...
सनराइज बैंकको थप नयाँ ३ शाखारहित बैंकिङ सेवा सुरु
काठमाण्डौ । सनराइज बैंक लिमिटेडले उदयपुर र ओखलढुंगा जिल्लामा थप ३ नयाँ शाखारहित बैंकिङ सेवाको सुरुआत गरेको छ। यीसँगै बैंकको शाखारहित बैंकिङ सेवाको संख्या ६६ पुगेको छ। गत शुक्रबार बैंकले उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–४ बगाहामा शाखारहित बैंकिङ सेवा खोलेको छ। त्यस्तै गत शनिबार ओखढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिका–४ रुम्जाटार र...
सनराइज बैंकद्वारा कन्ट्याक्टलेस कार्डको सुरुआत
काठमाण्डौ । कार्डमार्फत हुने भुक्तानीलाई अझै सहज, आधुनिक र विश्वस्तरीय बनाउने उद्देश्यका साथ सनराइज बैंकले कन्ट्याक्टलेस डेबिट, क्रेडिट र अन्तर्राष्ट्रिय डेबिट कार्डको सुरुआत गरेको छ । यो कार्डको प्रयोग गरी पोइन्ट अफ सेल (पीओएस) मा कारोबार गर्दा पिन राख्नु नपर्ने र कार्डलाई पीओएसमा ट्याप गरेर सजिलै कारोबार गर्न सकिने छ । यस...
सनराइज बैंकको एजीएमद्वारा ५.८% बोनस सेयर पारित, चुक्तापूँजी बढेर ९.४८ अर्ब पुग्यो
काठमाण्डौ । सनराइज बैंक लिमीटेडको वार्षिक साधारणसभाले ५.८० प्रतिशत बोनस वितरणको प्रस्ताव पारित गरेको छ । पुस २४ गते सम्पन्न १३ औं वार्षिक साधारणसभाले हाल कायम चुक्तापूँजीको ५.८० प्रतिशतका दरले बोनस सेयर र २.४८ प्रतिशतको दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । बैंक संचालक समितिका अध्यक्ष मोतीलाल दुगडको सभापतित्वमा...
दुई वाणिज्य बैंकको वार्षिक साधारणसभा आज, यस्ता छन् अजेन्डाहरु
काठमाण्डौ । लाभांश पारित मुख्य अजेन्डासहित दुई वाणिज्य बैंकले आज पुस २४ गते वार्षिक साधारणसभा डोकेका छन्। स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र सनराइज बैंक लिमिटेडले आज वार्षिक साधारणभा आयोजना गर्न लागेका हुन्। स्ट्यान्र्डर्ड चार्टर्डले आफ्नो ३४ औँ वार्षिक साधारणसभा काठमाण्डौको नयाँबानेश्वरीसथत एभरेस्ट होटेलमा भर्चुल भिडियो कन्फ्रेन्स...
सनराइज बैंकको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा अग्निसाईर कृष्णासवरण गाँउपालिका, सप्तरीमा
काठमाण्डौ । सनराइज बैंक लिमिटेडले सप्तरी जिल्लाको अग्निसाईर कृष्णासवरण गाँउपालिका–४, प्रश्वनी, सप्तरीमा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको सुरुवात गरेको छ । सो शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा संचालनमा आएसंगै बैंकको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा संख्या ५७ पुगेको छ । बैंकले अग्निसाईर कृष्णासवरण गाँउपालिका–४, प्रश्वनी, सप्तरीमा खोलेको शाखारहित बैंकिङ्ग...
सनराइज बैंकको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा गौंडा, झापामा
काठमाण्डौ । सनराइज बैंक लिमिटेडले झापा जिल्लाको बुद्घशान्ति गाँउपालिका–६, शान्तिनगर, गौंडामा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको सुरुवात गरेको छ । सो शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा संचालनमा आएसँगै बैंकको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा संख्या ५६ पुगेको छ । बैंकले बुद्घशान्ति गाँउपालिका–६, शान्तिनगर¬–गौंडामा खोलेको शाखारहित बैंकिङ्ग सेवाको प्रतिनिधिका...
एनआईसी एसियाले राख्यो नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सको २५ हजार कित्ता सेयर लिलामीमा
सबैको लघुवित्तको वार्षिक साधारणसभा चैत १४मा, बुक क्लोज कहिले ?
सिद्धार्थ बैंकको कर्मचारी सहभागिता प्रतियोगिताको नतिजा सार्वजनिक
इक्रा नेपालले ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई प्रदान गरेको रेटिङको पुनः पुष्टि
ग्राउन्ड जीरो : बजारमा करेक्सनको दबदबा, लगानीकर्ता भन्छन्, ‘डन्ट बी प्यानिक, होल्ड टाइट्ली’
‘ब्याजदर तत्काल बढ्दैन, लगानीकर्ता आत्तिनु पर्दैन’
सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि पेन्सन योजना ल्याउँदै
कुमारी बैंकका ग्राहकले केजीएच ग्रुपमा सेवा लिँदा विशेष छुट पाउने